UURKA EE GURIGA RIWAAYADAHA GURIGA: SIDA LOO OGAADO WAQTIGA, CALAAMADAHA UURKA, VIDEO - RIYO
Ugu Weyn Ee Riyo
Sidee loo ogaan karaa uurka ku jira guriga
Xayawaanno badani waxay ku hayaan riyaha ma aha oo kaliya ujeedada helitaanka caanaha, laakiin sidoo kale loogu talagalay taranta, sidaa daraadeed, dheddigga haweenka iyo labka ah ee muuqaalka riyaha ayaa la fuliyaa. Si loo ilaaliyo caafimaadka haweenka iyo in la hubiyo in ay soo baxaan caruurtooda, waa inaad ogaataa sida loo hubiyo xaamilada xayawaanka, awood u leh inay si habboon u bixiyaan oo ay u siiyaan daryeelka lagama maarmaanka ah ee riyaha iyo dhalaanka cusub. Ku saabsan arrimahan oo dhan - sii dheer maqaalkan.
Uurka ee riyaha waxaa sidoo kale loo yaqaanaa cufnaan. Beeralayda aan khibrada lahayn ayaa laga yaabaa inay ku adkaato inay go'aamiyaan caajisnimada gabadha ka dib markaad moodid. Calaamadaha calaamadaha ee qaabka caloolan weynaaday waxay u muuqdaan xayawaan kaliya mar dambe.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay natiijooyinka xayawaannada qadiimiga ah, riyaha ugu horreeya ayaa la degay in ka badan 10,000 oo sano ka hor Bariga Dhexe.
Laakiin waxaa jira calaamado dhowr ah oo ay suurtagal tahay in la ogaado bilawga uureysiga iyada oo aan la tixraacin hababka baaritaanka shaybaarka. Waxay ku kala duwan yihiin waqtiga uurka, laakiin waxay ku saleysan yihiin isbedel muuqaalka iyo dabeecadda xayawaanka.
Aad bay u adagtahay in si madaxbannaan loo ogaado uurka uurka 2-da bilood ee ugu horreeya, maaddaama xayawaanku weli haysan wax calaamado ah oo uur ah oo uur ah, sidaas awgeed hababka shaybaarka ayaa loo adeegsadaa horraanba ogaanshaha uurka.
Calaamadaha soo socda ayaa tilmaamaya cufnaanta suurtagalka ah ee haweenka:
dabeecadda xasiloonida kadib markaad miisaanka;
xoqin xayawaanka si loo toosiyo dhabarka;
la'aanta dhaqdhaqaaqa galmada 3 asbuuc kaddib marka la isku daro.
Ka dib markii muddada uurku ka badnayd 3 bilood, isbeddelka muuqaalka ariga ayaa dhacaya. Xitaa naas-nuujin aan la aqoon ayaa ogaan kara haddii ay si joogto ah u baaraan ariga.
Waa muhiim! Si aan waxyeello u geystin haweenka iyo caruurtooda, kaliya dhakhtarka xayawaanka waa in uu sameeyaa dhirbaaxo.
Calaamadaha ugu muhiimsan ee uurka muddada dhexe waa:
koror yar oo ah xajmiga caloosha;
ilmo galeenka oo weynaaday;
uurjiifka sii kordhay ayaa gariiraya derbiyada caloosha inta lagu jiro palpation;
haddii aad si tartiib ah u dhuujiso derbiyada caloosha hoostiisa hoostiisa, ka dibna iyaga oo hoos yimaada qaabab adag iyo kuwo wareegsan ayaa la dareemayaa;
isbitaallada uterine ee ku yaala habka ariga ee riyaha ayaa korodhka cabbirka isla markaana bilaabaan inay isku xoqaan.
Bilaha ugu dambeeya ee uurka, carruurtu waxay u koraan ilmo-galeenka ugu firfircoon. Dumarku waxay doonayaan inay xoog yeeshaan ka hor intaan dhalan, sidaas darteed ma aha muuqaalkeeda, laakiin sidoo kale dhaqankeeda ayaa isbeddela. Calaamadaha ugu muhiimsan ee uurka ee xayawaannada xilliga dambe waxaa ka mid ah:
caloosha ayaa wareegaysa, oo dheregsan;
haweeneydu inta badan way tagtaa;
kordhinta rabitaanka cuntada - haweenku waxay isku dayeysaa in ay awood u yeesho ayna ka hortagto dharka jidhka;
bararka xubnaha xubnaha taranka iyo candhuufta;
xabeeb qarsoodi ah ayaa ka qarsoon caarada xubinta taranka, iyo dambarka ka soo baxa jaakada ku taalla candho xoolo;
raaxaysiga qalabka lafdhabarka ee miskaha, miyirku wuxuu noqdaa dabacsanaan;
kor u kaca heerkulka jidhka bisha 5aad ee uurka iyo hoos u dhigga dhalashada ka hor.
Dumarka uurka leh waxay u baahan tahay nasasho ka hor dhalashada si ay u dhaliso ilmo caafimaad qaba kuna quudiyo caanaheeda. Waqtiga go'aan ka gaarista uurka waxay kuu ogolaaneysaa inaad xisaabiso taariikhda markaad u baahan tahay inaad tarjunto ariga ku jira xaalad qallalan, taas oo ah, joojinta caano.
Waxaan kugula talinaynaa in aad ogaato waxa dufanka ariga u fiican.
Joogitaanka uurku wuxuu muujinayaa calaamado isku mid ah xayawaanka da'doodu tahay. Haddii gabadhu tahay pervorotkoy, ka dibna muddada 3-4 bilood waxay bilaabmaysaa abuuritaanka firfircoon ee candho xoolo. Marka xigta, waxaan tixgelinnaa siyaabaha ugu muhiimsan ee loo go'aamiyo uurka xayawaanka.
Mid ka mid ah hababka ugu caansan ee lagu ogaanayo uurka uurka ee marxaladaha hore waa inay caanuhu hubiyaan. Waxaa la aaminsan yahay in ka dib marka labka iyo dheddig-laboodka caanaha xooluhu ay noqdaan qadhaadh, laakiin ma aha. Dhadhanka cuntadu wuxuu ku xiran yahay kaliya nooca roodhida cuntada ee la helo, oo aan la xiriirin uurka. Caanaha kama badalo midabkiisa iyo urka inta lagu guda jiro jilicsanaanta haweeneyda, laakiin sida ku xusan waxaad isku dayi kartaa inaad ogaato joogitaanka uurka.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad ogaatid inta caano ee riigtu siineyso maalin kasta.
Si tan loo sameeyo, samee talaabooyinka soo socda:
Biyo nadiif ah oo qabow ku dhex dar gali galaas.
Fiiri 2-3 dhibcood oo caano ariga ah oo dusha sare ah ee biyaha ku jira galaaska.
Haddii dhibcaha caanuhu aanay luminin muuqaalkooda oo ay hoos ugu galaan hoosta muraayadda, ka dibna bacrintu way guulaysatay, haweenkuna waxay uur leedahay.
Haddii caanuhu si dhammaystiran u tirtirto biyaha oo midabyo u dhigo midab khafiif ah, ka dibna riyaha ma aha uur.
Habka baaritaanka uurku wuxuu ku saleysan yahay xaqiiqda ah in caanaha xayawaanka ka dib marka uurku keeno uu noqdo mid cufan oo qaro weyn leh. Xitaa waxaa loo isticmaali karaa jilayaal cusub, laakiin waa mid aan sax ahayn, markaa marka la isticmaalayo, waxaa lagula talinayaa in la fiiriyo calaamadaha kale ee muujinaya joogitaanka uurka.
Calaamadaha ugu kalsoonida leh ee bilawga uurku waa kordhay tartiib tartiib tartiib ah ee ariga. Laakiin si aad u aragto isbeddeladan ku saabsan marxaladaha hore waa wax aan suurtagal ahayn, sidaas awgeed habkan waxaa loo isticmaali karaa marxaladaha dambe ee cidhiidhiga.
Ma taqaanaa? Marka laga cabsado ama aad u xumaato, riyaha qaar ayaa laga yaabaa "suuxdin." Xaaladdan waxaa sabab u ah myotonia ku dhasha, taas oo ay jirto jirid ku meel gaar ah oo muruqyada xayawaanka ah.
Horumarka uurka, mustaqbalka ilmuhu wuxuu si firfircoon ugu koraa uurka hooyadiis, sidaa daraadeed, calaamadaha dibedda waxay ka muuqdaan:
caloosha dumarku waxay bilaabmaysaa inay korodho qiyaasta;
Qeybta labaad ee uurka, caloosha ayaa kala baxda;
dhinaca bidix iyo midigta ee caloosha waxay u muuqdaan kuwo asmayn ah - dhinaca midig waxay noqotaa mid isku dhafan;
marxaladaha dambe, caloosha haweenku waxay hoos u dhacdaa oo soo noqotaa.
Habkani wuxuu suurtogal u yahay in la dhiso horey uurka oo ah xayawaan oo leh masiibo sare. Uga dhoofinta riyaha waxay dhacdaa xilliga gu'ga iyo dayrta, inta lagu jiro mudadaas waxaa lagu yareynayaa labka dheddigga. Calaamadaha ugu muhiimsan ee ugaadhsiga waxaa ka mid ah:
guduudasho iyo kororka xajmiga xubnaha taranka;
haweenku waxay noqotaa mid aad u kacsan, badanaaba waxay udhacdaa daboolka;
dabeecad aan caadi ahayn marka uu jiro nin ku dhow;
dheecaanka dheeraadka ah ee xubinta taranka.
Baro sida loo aqoonsado ugaadhsiga ariga.
Si loo ogaado uurka, sidan ayaad u baahan tahay:
dib u riix riyaha ragga 3 asbuuc kaddib markaad mala wadaagtid;
haddii maqnaanshaha calaamadaha ah ee haweenka, waxaa loo qaadan karaa inay uur leedahay;
haddii xayawaanku muujiyo calaamadaha ugaadhsiga, markaa uurku ma iman.
Hab qarsoodi ah
Habka lagu ogaanayo uurka waxay ku saleysantahay calaamado dibadda ah oo ka muuqda xayawaanka xayawaanka. Waad arki kartaa oo keliya laba bilood gudahood, haddii aad si joogta ah u baartid ariga.
Waa muhiim! Dhamaanba kuwa ugu fiican, arteraha uterine ayaa dareemaya marka xayawaanku ku jiro bisha saddexaad ee uurka.
Si aad u dhisto cidhiidhiga xayawaanka adoo isticmaalaya habkan, waxaad u baahan tahay:
Kor u qaad dabada dabadeedna fiiri xubnaha taranka.
Iska ilaali maqaarka maqaarka hoostiisa hoostiisa - inta lagu jiro uurka, waa la siman yahay.
Kormeer maqaarka of perineum - ee muddada cufan, waxay noqotaa mid si siman iyo xitaa.
Hubi bararka ku wareegsan perineum - bararkan wuxuu kordhiyaa xajmiga inta uu xaamiladu socoto.
Ku billow farta muujinta xayawaanka xayawaanka oo si khafiif ah u riixa arooriyaha xiga si uu ilmagaleenka u siiyo dhiiga. Inta aad uurka leedahay, arooriyadani waxay noqotaa mid aad u liidata oo waxoogaa yar ayay ka soo baxdaa socodka dhiigga.
Uurka uurku wuxuu soconayaa 147-150 maalmood. Taariikhda dhalashada waxaa lagu go'aamiyaa tirinta 150 maalmood laga bilaabo wakhtiga ugu dambeeyay. Haddii gabadhu dhabbo dhowr jibbaar, markaa dhalmada ayaa yaraan karta wax yar ka hor - ka dib 140-144 maalmood ka dib markaad labadaba. Haddii ay dhacdo in uur qaadid, haweenku mararka qaarkood waxay soo celin karaan farcankiisa, kiiskan, uurku wuxuu soconayaa 154-160 maalmood. Haddii ilmuhu dhicin waqtigii loogu talagalay, waxaa lagula talinayaa inuu la tashado xoolaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo doorto mashiinka caanaha riyaha.
Riyaha yar yar, 2-3 ilmood ayaa ku dhalan kara inta uurka la joogo, halka kuwa waaweyni ay badanaa dhalaan 4-5 dhalinyaro. Isla mar ahaantaana, waxay ku dhowdahay in ay si madax-bannaan u go'aamiso tirada shakhsiyaadka dhedigga ah.
Sidee u dhalatay?
Badanaa, riyaha ayaa si madaxbannaan u soo saara faraca, geeddi-socodka dhalashadu wuxuu soconayaa wax ka badan 2 saacadood. Xoogga dhaqdhaqaaqa shaqada riyaha wuxuu ku xiran yahay da'diisa, wanaagiisa guud iyo goobta embriyaha. Haddii gabadhu dhalayso markii ugu horeysay, markaa dhalmada ayaa gaabis ah, ileyska soo noqnoqda ayaa socon kara 40 daqiiqo. Iyadoo horumarinta caadiga ah ee uurka iyo fayoobaanta, xayawaanku uma baahna caawimada dhakhtarka xoolaha, hase yeeshee, haddii dhererku ku habboon yahay, waxaa habboon in loo yeedho takhasus u dhalashada.
Video: dhalashada guurka
Si riyadu u siiso dhalashada si guul leh, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo tiro hawlo ah diyaar garow ah oo la xidhiidha hannaanka dhismaha iyo isbedelka xannaanada xoolaha.
Ma taqaanaa? Dharka ka soo jeeda Angora iyo Kashmir ariga ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo muraayadaha kuwaas oo si gaar ah jilicsan.
Ka hor dhalmada, waa lagama maarmaan in wax laga beddelo cuntada riyaha iyo in la hagaajiyo xeerarka daryeelka:
si tartiib tartiib ah u joojinta xayawaanka 5-6 usbuuc ka hor taariikhda wanaajinta, si ay u hesho awood ay ku koraan farcankiisa;
si loo yareeyo qadarka caanaha, yareeyo qiyaasta raashinka succulent 2 jeer;
ka dib marka la dhameystiro hannaanka bilowga, waxaa lagama maarmaan ah in la soo celiyo raashinka bilowga ah ee quudinta oo siin riyaha 1-1.5 kg oo ah quudinta gaarka ah ee xooggan si ay u siiso tamar si horumarinta caadiga ah ee uur-ku-socodka firfircoonida sii kordhaya;
10-14 maalmood ka hor dhalmada, hoos u dhig qadarka cuntada xoogga leh 2 jeer, iyo 3-4 maalmood ka hor dhalmada si loo yareeyo xaddiga cuntada casiir leh;
ha siin xayawaanka tayada liidata ama cuntooyinka waxyeellada leh, waxyeelooyin cayriin;
Si loo ciribtiro halista dhicin, ha u ogolaan dhaawaca riyaha uurka leh, isbeddelka isbeddelka cimilada ama heerkulka hawada.
Sidoo kale waa muhiim in la sameeyo diyaarinta habboon ee dhismaha dumarka uurka leh iyo dhalaanka cusub. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
u diyaari riyaha qalinka gaar ahaan qiyaastii 2 m;
ka saar digada iyo wasakh ka soo qalinka ah, lakabka lakabka ah ee caws buu nadiifiyaa;
Qalaji qolka leh xalka lime dhawr maalmood ka hor lambarka;
siinta heerkulka hawada gudaha ee ku saabsan + 10 ... + 15 ° S, baabi'iyaan qoraalada;
ku rakib quudinta iyo cabista qalinka, ku buuxi raashin iyo biyo diirran oo horay u wata lambarka.
1.5-2 saacadood ka hor dhalmada, haweeneyda uurka leh ayaa bilaabeysa inay walwal ka hesho, ka dibna habka dhalmada ayaa bilaabmaysa. Inta lagu jiro lambarka, waa inaad raacdaa tilmaamaha si cad oo kormeer xaalada xayawaanka.
Sidoo kale akhri siduu nalka riyaha u dhaafi lahaa.
Algorithm tallaabo tallaabo tallaabo ah ee tallaabo inta lagu guda jiro keenista riyaha waxaa lagu tilmaamay hoos:
Sug ilaa inta xumbada dareeraha ka soo baxdo xubinta xayawaanka. Taas ka dib, lugaha hore ee riyaha iyo madaxa madaxa saaran waa inay muuqdaan.
Marka uu barafku gebi ahaanba ka soo baxo aabaha hooyada, waa lagama maarmaan in la nadiifiyo mareenkiisa neef-mareenka oo ka yimaada xab.
Haddii haweeney ay dhashey dhowr jibbaar, markaa waxay jidhkeeda ka tagayaan waqti gaaban.
Ku rid carruurta in madaxa dumarka, si ay u leefleefto, ka dibna ku tirtir maro nadiif ah oo dhar ah.
Xidid xuddunta xundhurta ilmaha oo leh nuuc yar oo lagu rusheeyey xal iodine. Dharka ayaa lagula talinayaa fogaan ah 2-3 cm caloosha.
Xididdii xuddunta xundhurta ee fogaanta 1 cm laga bilaabo tallaalka. Dhig istaaga iodine goynta la gooyey.
U fiirso riyaha dhalaanka ah 2-3 saacadood si ay u siiyaan gargaarka koobaad, haddii loo baahdo.
Sug inta uu ka soo wareegayo dhalmada kadib, inta badan wuxuu baxayaa dhowr saacadood ka dib marka muuqaalka dhalashada. Kadibna qashinka wasakhda ah ka soo saar qalinka kuna beddel caws cusub oo qallalan.
Dhibaatooyinka suurtagalka ah
Caadi ahaan habka dhalidda riigga ah ayaa caadi ahaan u socdaa, xayawaanku uma baahna caawimida xoolaha. Laakiin mararka qaarkood inta lagu jiro walaaca lambarka ayaa soo baxa oo halis gelin kara caafimaadka ama nolosha dumarka iyo caruurteeda.
Waa muhiim! Ka hor inta aadan sameyn wax tallaabo ah oo haween ah inta lagu guda jiro dhalmada, waxaad u baahan tahay inaad dhaqdo gacmahaaga oo aad nadiifiso.
Liisaska dhibaatooyinka suurtogalka ah iyo shuruucda looga gudbi karo ayaa hoos ku qoran:
Madaxda ariga ma soo baxaan. Sababta caqabadani waxay noqon kartaa mid weyn oo weyn, taas oo ka dhalatey taas oo aan ka soo bixi karin xubinta taranka haweenka. Si aad u caawiso haweeney u riixdo caruur, waxaad u baahan tahay inaad saliideyso aageeda siilka iyada oo leh Vaseline boris.
Riyaha dhalaanka ah ma guurto ama neefsado. Si aad u caawiso ilmaha, waxaad u baahan tahay in aad wax yar furto oo aad afuufto. Haddii qaabsocodkani aanu saameyn ku yeelan doonin, markaa riyaha ayaa dib loo dhigaa marar badanna dhowr jeer ayuu lugaha u leexiyaa si loo neefsado.
Uurjiifku si sax ah uma muuqan, iyo waqtiga dhalashada, dhabarka dambe ee jirka ayaa marka hore soo baxaya.. Xaaladdan, kaliya dhakhtarka xoolaha ayaa ka caawin kara xayawaanka, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad isla markiiba wacdo takhasusle.
Ariga ayaa ku dhasha caanaha amniotic. Si uusan dabku u jilcin, waxaad u baahan tahay inaad jarayso xumbada oo aad ka caawiso xayawaanka inay baxaan.
Dhalmada kadib ma baxayso. Haddii dhalashada ka badan 6 saacadood ay dhaaftay, laakiin ma jirto dhalmada ka dib, markaa ariga waa in la siiyaa diirimaad diiran oo ah miraha kaynta ama khamriga diiran. Haddii mandheerta uusan soo muuqan 10-12 saacadood ka dib, waa inaad isla markiiba la xiriirtaa dhakhtarka xoolaha.
Tallaabooyinka kadib dhalmada
Marka dhalmada kadib si guul leh loo dhammeeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo daryeel habboon oo loogu talagalay haweenka iyo dhalaanka cusub.
Marka la eego dhalidda riwaayad, waxaad u baahan tahay inaad fuliso tallaabooyinka soo socda:
socodka roogga ariga leh 4% xalinta dubista dubista oo u ogolow xayawaanka in ay nasato;
Ku quudi biyaha xayawaanka diirran ee sonkorta lagu daray iyo siin hay. Ka dibna haweeney cabi cabitaan 3-4 saacadood 2-3 cisho ka dib dhalashada;
ka dib lambarku, qoyaan qadar yar oo dambarka - ma aha mid ku habboon quudinta carruurta;
4-ta maalmood ee ugu horreeya haweeneyda waxaa lagu quudin karaa cuntada fudud ee fudud, tirada naas-nuujinta maalintii waxay ka kooban tahay ilaa 4 jeer, qaybaha waa inay yaraadaan;
toddobaadkii labaad ka dib dhalashada, dheddigga waxaa la siiyaa dhir, rooti rooti la karkariyey, iyo quudinta suunka si loo kobciyo soosaarida caanaha si loogu quudiyo faraca;
inta lagu jiro usbuuca koowaad ka dib dhalashada, ariga waxaa lagu shubay 5 jeer maalintii, 3-4 saacadood kasta. Ka hor inta aanad helin, miisaanka candhuufta loo baahan yahay;
toddobaadkii labaad ka dib lambarka, haweeney ayaa la caano 4 jeer maalintii.
Ma taqaanaa? Riyaha ayaa arki kara 340°, iyada oo aan loo jeedin madax, mahadnaq ardayga oo leh qaabka laydhka siman.
Si ay ubadkooda cusub u koraan caafimaadkooda, waxay sidoo kale u baahan yihiin inay bixiyaan daryeel haboon.
Astaamaheeda ugu weyni waxay ku qoran yihiin hoos:
u ogolow in ay caruurtu u tagaan haweeney 30-40 daqiiqo ka dib wanka si ay u cunaan;
Xaaladda ilaalinta riyaha ee wax soo saarka caanaha ka dib, ka dib marka la quudiyo dhererka, waa in si gaar ah loogu hayaa hooyada. Ku quudinta caruurtu waxay u baahan yihiin naas nuujin ah oo ay ku jirto caanaha hooyada iyo caanaha 4 jeer maalintii;
iyada oo ay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo farac ah, waxaa lagu dhejiyaa baqashda alwaax ama balaastik ah oo leh qaboojiye dufan leh, nadiifintu waa lagama maarmaan laba jeer maalintii;
marka riyaha ku kiciya beeraha yaryar, carruurtu waxay la joogaan hooyadooda, kuwaas oo naftooda quudiya ilaa da'da 3 bilood;
Carruurta dhawaan dhalatay ayaa lagu talinayaa in la tallaalo sida waafaqsan jadwalka. Talaalka ugu horreeya waxaa lagu sameeyaa da'da 4-7 maalmood kadib dhalmada.
Uur aan sax ahayn
Mararka qaarkood riyaha waxaa loogu yeeraa xaamilo been ah. Si xor ah u kala soocida xaamiladda dhabta ah waa mid aad u adag, sidaas darteed beeralayda illaa xilliga ugu dambeeya waxay xaqiijin kartaa in farcanka uu dhawaan soo muuqan doono.
Waa muhiim! Haddii ri'yadu leedahay caloosha aad u dhakhso badan, cunto xumo iyo neefsashadu way adagtahay, markaa tani waa calaamad xun. Xayawaanka waa in isla markiiba loo muujiyo xoolaha.
Xaamilada uur-jiifku waxay ka dhalan kartaa:
hormoon la'aanta hormoonka;
maqnaanshaha ukunta bacriminta.
Isla mar ahaantaana, xayawaanku wuxuu sii wadaa inuu muujiyo dhammaan calaamadaha uurka, inkastoo maqnaanshaha embro ee ilmo-galeenka. В организме козы происходят такие процессы:
orgiga ayaa noqda mid degan;
xayawaanka xoolaha oo kordha;
ilmo-galeenka ayaa ka buuxsamaya dheecaan biyood, taas oo ka dhalatay caloosha oo bilaabmaysa inay koraan;
marka ay dhalayso wakhtiga dhalmada, biyaha oo keliya ayaa ka soo baxa jidhka naagta, laakiin ma dhaley.
Uur aan sax ahayn ma aha cudur, iyo caanaha riyaha ayaa markiiba dib u bilaabi doona. Xaaladdan badanaa kuma dhicin khatarta haweenka, waana suurtagal in la go'aamiyo guriga dhexdiisa - taas awgeed waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto sheybaarka oo aad u sameysid ultrasound xayawaanka.
Baro sida loo daweeyo idaha iyo riyaha for furuqa.
Uurka uurku waa dhacdo farxad leh beeralayda, kaas oo kuu ogolaanaya inaad kordhisid soo saarista caanaha iyo waxay kordhisaa tirada xoolaha. Isticmaalka sifooyinka liistada ee qodobkan, waxaad xulan kartaa xayawaanka xayawaanka, iyo raacidda xeerarka ilaalinta riyaha inta lagu jiro uurka iyo ka dib markaa kuu ogolaanayso inaad hesho carruur caafimaad qaba.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Riyo 2019